Warshadaha codsiyada mootada Stepper
Darawal mooto 3-waji ah
Khaanadaha isku xirka
MASKAJIGA WAJIGA CAAFIMAADKA
mashiinka samaynta maaskaro
Mashiino aan caadi ahayn
Qalabka mashiinka alwaaxa mashiinka alxanka mashiinka xereen mashiinka daabacaadda dhoobada mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka PCB mashiinka qodista mashiinka mashiinka qodista mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka lagu buufiyo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka wax lagu xiro iyo mashiinka goynta mashiinka daabacaadda mashiinka mashiinka goynta mashiinka mashiinka wax lagu sawiro inkjet plotter mashiinka mashiinka sawirada qalabka saadka qalabka qalabka kala soocida Qalabka mashiinka kala goynta mashiinka adag mashiinka adag aluminiumka alxanka qalabka SMT qalabka baakadka toosan mashiinka baakadaha dhoobada POS Mashiinka qodista mashiinka jajabka mashiinka ciyaarta mashiinka
Madal saddex-geesood ah
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaraashka Nalalka Mashiinka Mashiinka Beerista Projector Secondary element, saddex isku duwo qalabka cabbiraadda
Mashiinka goynta mashiinka mashiinka alxanka laser mashiinka laser sawirqaade
Qalabka falanqaynta siligga
Mashiinka calaamadeynta batteriga wareega
Mashiinka calaamadeynta mashiinka mashiinka calaamadeynta mashiinka daabacaadda
Qalabka xawaaraha hooseeya
Qalab-qeybiyaha waxaa badanaa loo isticmaalaa dhaqdhaqaaqa dhabbaha alaabooyinka ee laga shaqeynayo barxadda XY. Marka la bixinayo, xawaaruhu waa yara yaraa, markaa qalabkani wuxuu u baahan yahay gariir soo noqnoqda oo aad u sarreeya iyo buuq ku socda mootada tallaabada. Qalabkan guud ahaan waxaa loo isticmaalaa jawi deggan oo xasilloon, shuruudaha saxsanaanta loo bixinayona waa kuwo aad u sarreeya. Haddii ay dhibaato ka timaaddo gariirka, saamaynta waxqabadka ayaa hubaal noqon doonta mid liidata, sidaas darteed matoorkeenna tallaalka ayaa lagu dabaqayaa qalabkan. Saamaynta ayaa ka fiican.
Qalabka la midka ah waxaa ka mid ah: Mashiinka goynta leysarka, qalabka baaritaanka, qalabka baaritaanka, mashiinka alxanka laser, mashiinka calaamadeynta laser, jig.
Xawaare hoose iyo qalab xawaare sare leh
Marka lagu daro dabeecadda jilicsan ee mashiinka xawaaraha-hooseeya, mashiinka xardho waa inuu sidoo kale muujiyaa mashiinka xawaaraha sare leh. Way adag tahay gaar ahaan haddii mootada stepper iyo wadaha labaduba ay leeyihiin astaamahan. Gawaarida guud ee gawaarida iyo wadayaasha way adagtahay in la gaaro. Tusaale ahaan, xasilloonida saddexda waji ayaa ka fiicnaan doonta, laakiin ma ahan xawaare sare, way adag tahay in la buuxiyo shuruudaha macaamiisha. Macaamiisha waaweyn: Wenzhou Golden Eagle iyo wixii la mid ah.
Shuruudaha la midka ah ee qalabka waxaa ka mid ah: mashiin adag oo adag, mashiinka alxanka aluminium aluminium, iskuduwaha qalabka cabbiraadda, mashiinka cajaladda, mashiinka kala-sooca, iwm.
Waqtiga dhejinta: Apr-28-2019
Cinwaanka: No.18 Hengshan Road, Degmada Cusub, ChangZHou, Jinagsu, Shiinaha
Sannadka Cusub ee Shiinaha